Zinedine Zidane oo mar kale walwal ku abuuray jamaahiirta Man United ee ka cabsida qaba inuu baxo Paul Pogba. – Gool FM
Zinedine Zidane oo mar kale walwal ku abuuray jamaahiirta Man United ee ka cabsida qaba inuu baxo Paul Pogba.
Abdirashid Mohamud July 22, 2019
(Yurub) 22 Luulyo 2019. Tababare Zinedine Zidane ayaa mar kale walwal ku abuuray jamaahiirta Manchester United ee ka cabsida qaba in Paul Pogba uu isaga tago garoonka Old Trafford, wuxuuna ka dhawaajiyay ilaa dhamaadka August iney jiraan waxyaabo ay qorsheeyeen ayna filayaan iney dhacaan.
Madrid waxaa si joogto ah loola xiriirinayaa Paul Pogba oo ka dhawaajiyay horaanta bishaan inuu jeclaan lahaa meel kale inuu noloshiisa ku tijaabiyo, walow ay Red Devils adkeysay qaabka lagu heli karo xiddigaan hadana Los Blancos wali quus kama istaagin xiddigaan.
Zidane ayaa wax laga weydiiyay sheekada ku saabsan Paul Pogba, wuxuuna ka dhawaajiyay iney wax uun dhici doonaan, isagoo sidoo kale aan meesha ka saarin in qof walba xushmad loo muujiyo iyadoo la eegaayo habka ay u shaqeeyaan xirfadleyaasha.
“Waxaan u baahanahay inaan qof walba xushmeyno, balse hal arrin aan idiin sheegi karo waxey tahay iney kooxda ogtahay waxa aan dooneyno inaan qabano” ayuu yiri Zidane.
“Wax ayaa dhici doona ka hor dhamaadka August, waxaana jiri doona isbadal”
Dhanka kale Bianconerri ayaa lala xiriirinayaa xiddigaan reer France kaas oo ka mid ahaa wiilashii ugu fiicnaa koobkii Adduunka 2018 ee wadankooda u suuragaliyay iney noqdaan horyaalka adduunka.
Marwada duqda ah waxey ku heli kartaa xiddigaan saddex xiddig iyo lacag kaash ah oo wada socda, Maurizio Sarri ayaana jeclaan lahaa inuu xiddigaan ku arko kooxdiisa.
Xulka qaranka Soomaaliya oo caawa la ciyaaraya dhiggooda Jabuuti
Jurgen Klopp oo farxad galiyay jamaahiirta Liverpool ee loo sheegay in Sadio Mane uu maqnaan doono kulamada ugu horreeya fasal ciyaareedka bilaaban doona.